Sharciga Doorashada Heer Federaal: Goortay Ceelalyo Heshiiso ayaa Xoolo Cabbaan - WardheerNews
Sharciga Doorashada Heer Federaal: Goortay Ceelalyo Heshiiso ayaa Xoolo Cabbaan
W/Q Maxamed Sheekh Cali (Doodishe)
Maalintii Sabtida 28/12/19 ayuu Golaha Shacabku ansixiyay sharciga doorashada heer federaal oo muddo dhawr todobaad ah uu ka doodayay, halkaana waxaa ku soo af-jarmay dooddihii la xiriiray nooca doorashada xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka iyo doorashada Madaxweynaha JFS.
Sharciga doorashada ee la ansixiyay ayaa caddaynaya in xildhibaanadu ku imanayaan doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan nidaamka aqlabiyadda, kursi kastana goonidii loogu codaynayo (Qod. 10aad), halka xildhibaanada Baarlamaanka Federaalku (Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare) ay dooranayaan Madaxweynaha JFS (Qod. 11aad). Sidoo kale sharcigani waxa uu ciriiri badan geliyay fursadda uu Baarlamaanka Federaalku ku samayn karo muddo kororsi goorta xilkiisu dhamaado ama ay xilka ugu kordhin karaan madaxda la doortay (Qod. 53aad).
Tillaabadan uu qaaday Golaha Shacabku waxa ay meesha ka saartay qorshihii xukuumaddu ku damacsanayd in nooca doorashada dalka ka dhacaysa 2020/2021 ay noqoto mid ku salaysan nidaamka liiska xiran ee metelaadda isu-dheelitiran iyo Madaxweynaha oo lagu dooranayo codeyn dadweyne, arrinkaa oo ka dhigan turun-turro kale oo xukuumaddu la kulantay, taasoo biirinaysa kuwii horay uga qabsaday doorashooyinkii maamul-goboleedyada oo is-bedelkii ay damacsanayd aanu u hirgelin.
Dooddihii iyo dhaliilihii ay xisbiyadda siyaasadda ee Muqdisho ku fureen hindisaha sharciga doorashada ee ay xukuumaddu u gudbisay Golaha Shacabka bishii May 2019 iyo midka Guddiga Kumeelgaarka ah ee Diyaarinta Doorashooyinka Qaranku u gudbiyay Golaha Shacabka bishii Novembar 2019 waxa ay saameyn mug leh ku yeesheen inuu meesha ka baxo hannaankii doorasho ee ay xukuumaddu soo diyaarisay, taasoo muujinaysa qeyb kamida miisaanka xoogagga siyaasaddu ku leeyihiin jiheynta masiirka siyaasadeed ee dalka.
Waxaa intaa dheer in maamul-gobleedyada Puntland, Jubbaland Iyo Galmudug ay bishii May 2019 soo saareen war-saxafadeed ay gebi ahaanba ku diiddan yihiin hindisaha sharciga doorashooyinka ee xukuumaddu u gudbisay Golaha Shacabka, iyaga oo diidmadooda ku saleeyay qodobbo ku jira sharciga oo ay ku tilmaameen inay ka hor-imanayaan dastuurka iyo iyaga oo aanan laga talo-gelinin diyaarintiisa.
Dhinac marka laga eego ansixinta sharci doorasho oo dalku yeesho waa tillaabo mudan dhiirigelin iyo bogaadin, taasoo loo qaaday dhanka xoojinta aasaaska dawladanimo ku salaysan hannaan dimuquraaddi ah oo awoodaha hay’adaha dawladdu isu-dheelitiran yihiin, is-xisaabinayaan isna dhamaystirayaan iyo hanaqaadka hannaan siyaasadeed hufan oo daah-furan dalkana ka ilaaliya inuu mar kale waajaho xaalad Qaran-jab.
Dhanka kale marka la eegana duruurfaha siyaasadeed, amni iyo kuwa dhaqaale ee dalku ku sugan yahay, koobnaanta waqtiga ka dhimman xilliga doorashada, baahida loo qabo diyaarinta xeerarka kaabaya sharcigan iyo hawlaha farsamo ee aanu la’aantood sharcigani dhaqan-gal noqon karin, iyo sidoo kale xal u helidda arrimaha Somaliland iyo maqaamka gobolka Banaadir, waxa ay su’aali ka iman kartaa in sharcigani noqonayo midka nidaamiya doorashooyinka 2020/2021.
Ma muuqato ilaa iyo hadda wax iska baddalay mawqifkii diidmada ahaa ee maamul-goboleedyadu ka qaateen sharciga doorashooyinka, iyadoo ay jirto in maamul-goboleedka Koofur Galbeed uu ku soo biiray maamulladii horay u diidanaa sharcigan. Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa bishii tagtay ee Decembar si cad u qeexay aragtidiisa ku aaddan doorashada 2020/2021 isaga oo soo jeediyay in lagu saleeyo hannaankii 2016 oo la horumariyay, halka Madaxweynaha Puntland hadal uu ka jeediyay xarunta PDRC ee Garowe isla bishaa Decembar uu ku xusay inay lama-huraan tahay in la isugu yimaado wadatashi “Dhab ka hadal ah” oo looga arrinsanayo hannaanka doorashada 2020/2021.
Haddaba haddii xukuumaddu ay seegtay hannaankii ay damacsanayd inay u agaasinto doorashooyinka, dhaqan-gelinta sharciga la ansixiyayna ay duruufo badan ku xeeran yihiin, albaabkii muddo kororsiguna uu xirmay, su’aasha is-weydiinta mudan ayaa ah in madaxda federaalku diyaar u yihiin inay wadaxaajood kala galaan maamul-goboleedyada hannaanka doorashada 2020/2021 ee ku xusan sharciga doorashada iyo guud ahaan agaasinka doorashada iyo in kale? Haddii aysan wadaxaajood diyaar u ahaynse maxaa dhici kara?
Laga soo bilaabo tan iyo markii shirkii dib-u-heshiisiinta Carta ee sanadkii 2000 dib loogu soo u askumay hannaanka dawladnimo ee curdanka ah waxaa agaasinka doorashooyinka gacanta ku hayay dawladaha xubnaha ka ah IGAD, Midawga Afrika iyo Beesha Caalamka oo taageero dhaqaale mid farsamo iyo mid amni la garab taagnaa, mararka qaarna martigalinayay doorashada qudheeda, waxaana mararka qaar dhacaysay in xasarado siyaasadeed aloosmaan sidii dhacday xilliyadii Madaxweyne Cabdiqaasim iyo Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf taasoo keentay in doorashada dalka dibaddiisa loo raro, sidoo kale waxa mararka qaar dhacday in isbaddal lagu sameeyo xukuumadda oo la baddalo ra’iisal wasaaraha si loo fududeeyo dejinta xasaradaha siyaasasdeed (RW Nuur Cadde oo baddalay RW Geeddi, Oct. 2007) ama loo dardargeliyo ka guurista marxaladdii ku meel-gaarka ahayd (RW Gaas oo baddalay RW Farmaajo, June 2011) iyadoo dhammaan farsamooyinkaasi ay ahaayeen kuwa ka imanayay Beesha Caalamka.
Ra’iisalwasaare Nuur Cadde ayaa ku guuleystay inuu soo af-jaro qeyb ahaan xasaradihii siyaasadeed ee xilligaa jiray, kana qeyb qaato doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009, kadib markii uu Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf xilka banneeyay 28/12/2008 isagoo si geesinimo leh u qiray in “Dawladiisii ay wax qaban weyday, oo ay ku guul darreysatay inay Somaaliya nabad ka dhaliso”, halka Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Ra’iisalwasaare Cabdiweli Gaas oo waajahayay duruufo adag ay ku guulaysteen inay aasaaska u dhigaan hirgelinta hannaankii dawladnimadu kaga baxday marxaladdii kumeelgaarnimada iyo doorashadii ugu horeysay ee dalka gudihiisa ka dhacda dagaaladii sokeeye kadib.
Si taa ka duwan Madaxweyne Xasan Sheekh oo waajahayay caqabado siyaasadeed oo xooggan oo ka imanayay gudaha iyo dibaddaba, waqti badanna ku bixiyay dhismaha maamul-goboleedyada Jubbaland, Koofur-galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, ayaa waxa uu ku dedaalay in hannaanka doorashada iyo agaasinkeeduba aanu ka bixin gacanta Soomaalida, taasoo waddada uu u maray ay ahayd wadaxaajood, dood-qaran iyo talo-wadaag dhex-mara xarunta (Muqdisho) iyo daafaha (maamul-goboleedyada) Natiijadii ka soo baxday wadaxaajoodkuna waxa ay noqtay dhismihii Madasha Hogaamiyayaasha Qaran oo diyaarisay hannaankii doorashadii dalka ka dhacday 2016/2017 ee uu talada dalka ku hantay Madaxweyne Farmaajo.
Hawshii ay Madasha Hogaamiyayaasha Qaranku qabatay xilligii loo diyaar-garoobayay doorashadii 2016/2017 waxa ay astaan u tahay horumarka lagu tallaabsan karo haddii madaxda dalka hogaamisa ay la yimaadaan xilkasnimo, tanaasul, xeerinta duruufaha dalka ka jira iyo u damqashada ummaddan ay siyaasad xumadu tabaalaysay. Waxaa iyana xusid mudan kaalintii Isbahaysiga Isbedel-doonka oo doodihii iyo dhaliilihii uu la hortaagnaa Madasha Hogaamiyayaasha Qaranka ay saamayn toos ah iyo mid dadbanba ku lahayd geeddi-socodkii doorashadii 2016/2017.
Garaadka fayow iyo garashada xeerinaysa duruufaha dalka ka jira waxa ay tilmaamayaan inay lama-huraan tahay in madaxda federaalku furaan dood-qaran oo dhex-marta Federaalka, maamul-goboleedyada iyo xoogaga siyaasadeed iyo kuwa bulshada, taasoo looga arrinsanayo hannaanka doorashada iyo agaasinkeeda, lana yimaadaan dhiirranaan iyo fur-caddi ka maran fagaare ka nax, wadaxaajoodka oo laga fiigo iyo adeegsiga xeelado rakhiis ah oo waqtiga dila, mira-dhalna aan ahayn. Haddii taasi suuro gal noqon weydo waxa la filan karo waa dufaanno siyasadeed oo sababa in dib loogu laabto agaasinkii Beesha Caalamka ee hannaanka doorashada.
Haddaba maanta ayay madaxda Federaalku, gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo – oo khibrad u leh sida xaalku noqonayo haddii dib loogu laabto agaasinka Beesha Calaamka – waxa uu fursad u haystaa inuu ka dabbaasho duufaannada siyaasadeed ee sababi kara inuu ku qasbanaado baddalidda xukuumadda ama isaga qudhiisu uu noqdo dhibane ku baxa hardanka siyaasadeed ama isaga oo hogaamiye qaran ah uu marti ka noqdo agaasinka doorashada dalkii uu hogaaminayay.
Taariikhda dhaw ee siyaasadda dalkeenna waxa ay na baraysa in wadaxaajood iyo dood qaran oo xeerinaysa duruufaha dalka ka jira ay tahay halka ay taallo maslaxaddeenna ummad ahaan, masuuliyadda ugu weynna waxa ay saaran tahay madaxda heer federaal, heer maamul-goboleed, hogaamiyayaasha xoogagga siyaasadeed, hal-abuurka iyo indheergaradka haga ra’yiga bulshada “Goortay Ceelalyo heshiiso ayaa xoolo cabbaan”.
Maalmaha innagu soo foolleh ayaa ka warrami doona halka madaxda federaalku ula jahaystaan doonida siyaasadda ee ay naakhuudaha ka yihiin!
Maxamed Sheekh Cali (Doodishe)